Mukana (nhengo) - Wikipedia
Muchidzidzo Chezvipenyu (Biology) mukana, (birth canal) inhengo yesikarudzi yevakadzi inoshandiswa pakuzvara. Nhengo iyi ndiwo muronga unobuda nemwana achibva muchibereko achizobuda kunze.
Pakutaura kwemazuva ose nhengo iyi chimwe chikamu chembutu kana kuti beche. Muchinyorwa chino muchashandiswa zita rokuti mbutu nokuti ndiro rinenge rine chiremera. Kuti tinatse kunzwisisa tinofanirwa kutsanangudza chimiro chayo mbutu yose.
Mbutu dzinosiyana siyana, mamwe makuru uye mamwe madoko. Nhengo iyi iri muhudyu panosangana makumbo pakati pawo. Mbutu ine zvikamu zviri kunze nezvikamu zviri mukati memuviri. Mbutu ine maburi maviri anoti reweti nerekuzvara. Kana mukadzi akamira kunze kunoonekwa hwabvu hunovhara zvichibva kuzvidya kunosvika pamutsemu uri pakati.
Mbutu iri pedyo nemukosho rinova buri rinoburitsa dhodhi. Madzimai vanofanirwa kuchenjera kuzadza Mbutu yavo matuzvi pakupisika sezvo. Murawu wokupukuta kwemadzimai unoti vanofanirwa kupukuta tsvina zvichibva mberi kuenda shure kuti tsvina isapinda kumberi. Izvi zvinodzivirira hutachiona huri mutsvina yemunhu kuti husapinda mberi.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mukana_(nhengo)&oldid=68920"
Last edited on 17 Gunyana 2019, at 22:51
This page was last edited on 17 Gunyana 2019, at 22:51.